Onye ọka iwu Missouri Cannabis - Dan Viets na-ekwu okwu Cannabis na Missouri
Iwu Missouri Cannabis ya na onye ọka iwu Dan Viets
Ndi Missouri ga - akwado iwu Cannabis nke Okenye na 2020?
Ọka iwu ọka iwu Missouri, Dan Viets emeela iwu na Missouri ihe karịrị afọ iri atọ. Ọ na-eji oge ya niile na-agbachitere ndị Missouri na iwu cannabis nke oge ochie. Na mgbakwunye na ịbụ onye isi na NORML ọ bụkwa onye na-anabata Conan O'Brien na Ngosipụta Tonight Show '' Ntị Ntị '' maka “Na-elekarị anya dịka Prọfesọ Kọleji Onye Nwere Ike Inweta Gị Mgbe Niile”. Ọ na-akwado cannabis ogologo oge onye na-ebute ọgụ maka cannabis ntụrụndụ na Missouri. N'izu a, Dan dara site na ya ikwu maka iwu ndị nwere ike nke Missouri na ihe ha mere atụmatụ maka ụbọchị ntuli aka.
Ọnye na-bụ Dan Viets?
Ọka iwu Missouri cannabis, Dan Viets, na-arụ ọrụ na Columbia, MO
Ọ na-agbachitere ikpe ndị cannabis ndị omempụ
NORML Board of Directors and Missouri State Coordinator maka NORML
Apụtala na sekit na gọọmentị etiti na Missouri
Lawme iwu kemgbe 1986
Cannabis na Ballot
Missouri nwere ike enweghị ndekọ kachasị mma maka mkpụrụ osisi cannabis, mana ha na-achọ ịgbanwe nke ahụ. Missouri chọrọ ịme iwu cannabis ntụrụndụ iwu na 2020. Iji banye na ntuli aka, ka ọ dị mkpa ịbịanye aka 160,199 tupu Mee 3, 2020. Na 2018, Missouri tozuru oke ịgafe Ahụike Ahụike Ahụike Veteran na nnwere onwe a na-akpọ Amendment 2. Ndezigharị 2 cannabis iwu kwadoro maka ojiji ahụike, etinyere ụtụ isi nke 4%, nkọwapụta na ụtụ ụtụ isi ga-aga ọrụ nlekọta ahụike maka ndị agha. Ndezigharị 2 gafere 65.59% nke votu ahụ. Anabatara ndi toro eto n’ime ya ole na ole ọnọdụ tozuru oke gụnyere PTSD, IBS, na ọnọdụ adịghị ala ala.
Kedụ ihe ndị okenye ji eme ihe na Missouri?
Missouri cannabis ọka iwu, Dan Viets, yana Ndi isi ojoo ndi ohuru, na-akpọkọta ndị bịanyere aka na ntinye akwụkwọ maka iji cannabis eme ihe. N'okpuru a:
A ga-ahapụ ndị okenye 21+ ịzụta ma nweta cannabis
Crimesfọdụ mpụ cannabis ga-ebufu
A ga-etinye ụtụ 15% na azụmaahịa
A ga-ekenye ụtụ ego sitere na ndị na-ere ahịa na-ere ahịa na ndị Missouri veterans kompeni, State Road Fund, na ndị otu na-anaghị akwụ ụgwọ raara nye ọgwụgwọ ọgwụ riri ahụ yana mgbochi oke.
Kedu ihe onye ọka iwu Cannabis nwere ike ịmere gị?
Cannabis ọgwụ na abụwo iwu na Missouri kemgbe 2018. N'oge a, anyị na-ahụ ume siri ike nke ndị ome iwu nyere iwu inye marijuana ntụrụndụ na Missouri na 2020. Olee otú nke a ga-esi zụọ ahịa wii wii Missouri? Anyi ga - enwe ike ihu egwuregwu mara mma n’ahịa ka a na-ekwu maka itolite, na-ere ma na-ese wii wii na steeti? Anyị na-enye azịza ya dịka akụkụ nke Dan Viets na Associates nke na-enyere aka ịmepụta ihu igwe dị mma maka azụmahịa na ndị na-eme wii wii na Missouri.
Ndi Marijuana ga-emebi iwu na Missouri na 2020?
Ndị na-akwado marijuana kwadoro nkwado nke ịhazi iwu wii wii Missouri. Ndị ntuli aka ga-enwe ohere ịtụ vootu maka iji okenye eme ihe na Missouri na 2020, nke ga-emeghe ụzọ maka ọtụtụ ohere azụmaahịa na steeti a.
Nyocha gbasara ego na-egosi steeti ahụ ga-ewepụta ihe ruru $ 155 nde kwa afọ site na 2025. Amụma ndị a na-ekwu maka ohere ahịa dị na steeti a. Ọtụtụ steeti na-emepụta oke ego na-akpata ekele na sistemụ na-enye ndị ọrụ cannabis ohere iri wii wii.
A bịa n'ihe gbasara wii wii, ndị a na-eme atụmatụ na-agwa anyị na, na 2020, a ga-enwe ndị ọrịa marijuana dị nde 19,000 aha ha na Missouri. Ha niile tozuru etozu na kaadị wii wii nke gọọmentị ga-arụ dị ka ikike maka ị usingụ wii wii maka ebumnuche ọgwụ.
Kedu ihe iwu mbipụta wii wii pụtara nye ndị ụlọ ọrụ nkeonwe na Missouri?
Na ntuli aka November 2020, ndị ntuli aka na Missouri ga-enwe ohere ịme ntuli aka maka mmebi iwu nke cannabis nke kwesịrị ikwe ka ndị dị afọ 21 gbagowe ma nwee otu ounzi wii wii n'ihe metụtara iwu. Purchasezụta ahụ ga-ekwe omume ịme site n'aka ndị ahịa ikike ikikere ndị na-anwa inweta ikikere ka ha bụrụ akụkụ nke ahịa cannabis na-emeghe.
Steeti kwupụtara na a ga-enye akwụkwọ ikike 192 afọ a na Missouri, nke bụ naanị 16,5% nke ntinye akwụkwọ niile nke a ga-anakwere afọ a. Na mkpokọta, ndị na-achọ akwụkwọ ruru 1,163 na-anwa ịnweta ikikere maka ndị nkesa gafee steeti ahụ, nke na-ekwu maka olu nke ụtụ ego enwere ike ịmepụta ma ọ bụrụ na steeti na-enyekwu ndị na-achọ akwụkwọ ikike inweta akwụkwọ ikike inweta akwụkwọ ikike.
Na ntụle, Colorado nyere ndị nwe ụlọ ahịa cannabis ntụrụndụ 1,577 na 2018. Ọ bụ ezie na ọnụọgụ ndị enyere ikike ejiri nwayọọ nwayọọ belata site na 2020, anyị nwere ike ịchọpụta otu Colorado si akwado ndị mgbasapụ na obere azụmaahịa na-achọ ịbụ akụkụ nke ahịa ahịa cannabis Colorado. Na June 2019, Colorado gafere $ 1 ijeri ego ego cannabis steeti, nke bụ otu n'ime nsonaazụ nke ọtụtụ mkpọsa maka oriri okenye nwere ibu ọrụ.
Ngalaba na-ahụ maka ahụike nwere ike inye ọtụtụ akwụkwọ ikike dịka ha chọrọ, mana echiche nke ndị Missouri bụ na ebe nrụọrụ na ebe a na-akọ ugbo kwesiri inwe oke. Ndị chọrọ maka akwụkwọ ikike iji nweta ikike ga - anata usoro nhọrọ siri ike dabere na sistemụ akara. Ọtụtụ n'ime ndị na-achọ akwụkwọ mkpesa banyere usoro nke iji nyochaa ngwa ndị ahụ n'ihi na ụlọ ọrụ onwe onye nwere ụkpụrụ nke aka ha na usoro nyocha. Ọ bụrụ na nke a ga-abụrịrị esemokwu na Missouri, ahịa azụmaahịa mpaghara nwere ike ida nnukwu ikike maka uto ego a na-enweta na ahịa.
Kedụ ka ndị ọka iwu Cannabis Missouri ga-esi nyere aka wepụta iwu wii wii na steeti a?
Site na ebumnuche zuru ezu maka ịmebe iwu cannabis na Missouri, a na-abịa ajụjụ banyere njigharị kwesịrị ekwesị nke ngwaahịa wii wii. Thekpụrụ ntinye akara ga-emetụta Missouri dịka steeti ndị ọzọ, gụnyere South Dakota na Kansas, ebe itinye akara ahụ kwesịrị ịkọwa ngwaahịa ndị ahụ n'ụzọ akọwapụtara. Ihe ngwungwu na aha mmado aghaghi iru ihe omuma ndi dabara na ntuziaka ndi mmadu. Ekwesịrị ịhazi usoro mgbasa ozi na ire ahịa nke ngwaahịa ndị a, ọkachasị ma a bịa na mgbasa ozi nye ndị na-eto eto na-erubeghị afọ 21. A ga-edenye ha ngwa ahịa ma kpọsaa ya n'ụzọ ọ masịrị ndị ntorobịa.
Lookingchọ onye ọka iwu Cannabis nke Missouri bụ Nhọrọ Dị Mma Maka Startmalite Azụmaahịa?
Ebumnuche maka ịkpụ wii wii na Missouri na-emezu ya kpamkpam na 2020. Anyị ga-ahụ etu steeti a nwere ike isi na-eso steeti ndị nweburula wii wii maka ntụrụndụ. Ndị ọrụ gọọmentị na-ekwu na ọ ga-abụ nnukwu nzọụkwụ maka ụlọ ọrụ cannabis Missouri n'ihe metụtara ikike obodo na iwu nchịkwa.
Ọ bụrụ n’ịchọọ imeghe ụlọ ahịa ma ọ bụ na-ere ahịa, ị ga-achọ nke a Ọka iwu ọka iwu Missouri onye ga enyere gị aka n’usoro azụmaahịa azụmaahịa dị mkpa dị na steeti Missouri.
Iwu Dan Viets